KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 17/03/2013
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 4:30 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:56 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:40 PM No comments:
ကရင်ရွာသား ၂၀၀၀ ကျော်စုရုံးပြီး သံလွင်မြစ်မှာတည်ဆောက်မည့် ရေကာတာ လက်မခံကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြီး ဆန္ဒပြ ကရင်အမျိူးသားများဒီကိစ္စကို မျက်ခြေမပြတ်ဖို့ လို ပါသည်။ လက်ပံတောင်းကြေးနီတောင်ကိစ္စလိုအခြေအနေတွေလွန်ပြီးသွားရင် ပြန်လည်ရယူဖို့ ဆိုတာ အင်မတန်မှခက်ခဲလှပါမည်။ သို့ ဖြစ်ပါ၍ ကရင်အမျိူးသားများဒီကိစ္စကို အမျိူးသားရေးအသိဖြစ် အတူတကွတွန်းလှန်ကြပါ။ ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံးလည်း ဒေသခံလူထု၏ ဆန္ဒကိုနားထောင်ပြီး ကာကွယ်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ကရင်အမျိူးသားများဒီကိစ္စကို မျက်ခြေမပြတ်ဖို့ လို ပါသည်။ လက်ပံတောင်းကြေးနီတောင်ကိစ္စလိုအခြေအနေတွေလွန်ပြီးသွားရင် ပြန်လည်ရယူဖို့ ဆိုတာ အင်မတန်မှခက်ခဲလှပါမည်။
သို့ ဖြစ်ပါ၍ ကရင်အမျိူးသားများဒီကိစ္စကို အမျိူးသားရေးအသိဖြစ် အတူတကွတွန်းလှန်ကြပါ။ ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံးလည်း ဒေသခံလူထု၏ ဆန္ဒကိုနားထောင်ပြီး ကာကွယ်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:21 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:10 AM No comments:
ရဲရင့်(ကနေဒါ) ... 3/19/2013
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 11:59 PM No comments:
နိုင်ငံတော်မှာ … အကြွေး ၂၆.၈၄ ဘီလျံဒေါ်လာ ကျော် ရှိနေချိန်မှာ ဦးပိုင်မှာ… ဒေါ်လာ သန်းရာချီ ၀င်တဲ့..၀င်ငွေ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်း ၆၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ
ဦးပိုင်မှာ… ဒေါ်လာ သန်းရာချီ ၀င်တဲ့..၀င်ငွေ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်း ၆၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ ..
Union of Myanmar Economic Holdings Limited operates as an industrial conglomerate that engages gem production and marketing, garment factories, wood industries, goods and beverages and other trading companies, supermarket, banking, hotels, tourism, transportation, construction and real estate, computers, telecommunications, electronics and equipment, and steel and cement industries. The company is based in Yangon, Myanmar.
ဆင့်ပွားထောက်မ ပါဝင်ပူးပေါင်းမှု ပြုသော ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ (၂၁)မျိုး (Joint Venture)
၄။ ရော့သ်မင်အော့ဖ်ပေါလ်ဖေါလ်မြန်မာ ပရိုက်ဗိတ်လီမိတက် (Paul Maul Myanmar Private Limited.)
၂။ မြန်မာလင်း(ဒ်)အင်(န်)ဒဲဗဲလော့မင့် လီမိတက် (Myanmar Land and Development Limited)
၄။ ဟံသာဝတီဂေါက်ကွင်းနှင့်မြို့ တော်ကလပ်အသင်း လီမိတက် (Hanthawaddy Golf Club and City Golf Club Limited.)
ရာနှုန်းပြည့် တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံခြားသား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသော လုပ်ငန်းများ (၁၁)မျိုး
၁။ အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းကို မလေးရှားမှ Comfort International Incorporate (CII) နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
၂။ ငပလီကမ်းခြေနှင့် ကမ်းသာယာကမ်းခြေတို့တွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းများကိုကမ္ဘောဇ၊ ထူးမော်၊ အေးရှားဝေါလ်၊ ဝုဒ်လန်း၊ ယုဇန၊ ထွန်းလင်းရောင်၊ ဆဲဗင်းဖိုးဆဲဗင်းကုမ္ပဏီတို့ နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ခြင်း
၄။မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်၊ပျဉ်းမပင်မြေများကို မြန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာလီမိတက်ကို ခေါက်ဆွဲခြောက်စက်ရုံလုပ်ရန် ငှားရမ်းခြင်း
၆။ သူဌေးကျွန်းဟိုတယ်နဲ့ ကာဆီနိုလုပ်ငန်းကို ထိုင်းမှ အက်ဒမန်ကလပ်လီမိတက်ဒ်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
1.	မိုးကုတ် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း
2.	မိုင်းရှူး ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း
3.	နန်းယားဒေသ ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း
4.	ရွှေသတ္ထု တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
5.	မော်ချီးဒေသ ခဲသတ္ထု တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
6.	ကျောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
7.	ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
8.	ဂရင်းနှိပ် ကျောက်ပြားစက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)
9.	ပလပ်စတစ် ရက်ထည်အိပ်စက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)
10.	မြန်မာပေါ်စကို စတီးလ် သွပ်ပြားစက်ရုံ (Myanmar Posco Steel Co., Ltd.)
11.	မာမီး ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ
12.	Red Rubby စီးကရက်စက်ရုံ
13.	ဒူးယားစီးကရက်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ)
14.	မြန်မာဘီယာ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
15.	လန်းပီ ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီး ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း
16.	ငွေပင်လယ် မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း
18.	ရေထွက်ပစ္စည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်း
19.	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ (ကြက်/ငါး/ပုဇွန်)
20.	ရေလုပ်ငန်း စက်မှုရုံ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
21.	တနင်္သာရီတိုင်း ငှက်သိုက် ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း
22.	ဆီအုန်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (ကော့သောင်း)
23.	သကြားစက်ရုံ (ဥက္ကံ)
24.	ပဒုမ္မာ ဆပ်ပြာစက်ရုံ (ပေါင်)
25.	သကြားစက်ရုံ (အင်းငါးခွ)
26.	တော်ဝင် ပလပ်စတစ် လူသုံးကုန်စက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)
27.	ဆာလဖြူရစ် အက်စစ်စက်ရုံ (မုံရွာ)
28.	နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှုလုပ်ငန်း
29.	တပ်မတော်သား သက်သာချောင်ချိရေး အရောင်းဆိုင်
30.	ဒုိ့ယာမြေ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
31.	ပြည်သာယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
32.	Ruby Mart Supermarket
33.	Pyininbin Industrial Park (in North Yangon’s suburbs)
34.	Myanmar Five Stars Shipping
35.	Gandamar Wholesale
36.	Myanandar Purified Drinking Water
37.	Myanmar Nobel College (Ahlone, Yangon)
38.	လွယ်ဂျယ်။မောတောင် (ကျောက်မီးသွေးမိုင်း)
39.	Myin Gyan Steel Mill
40.	Ywama Insein Steel Mill
41.	Kyauk Swe Gyo(near Aung LAN) Steel Mill
42.	Maymyo Iron Mill
43.	တာရာစက်ရုံကြီး (အင်းစိန် ရွာမ)
44.	တန် ၄၀၀၀ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (ဘားအံ)
အချက်အလက် အားလုံး မှန်ကန်ကြောင်းကိုတော့ အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ မှားယွင်းနေတာ ဖြည့်စွက်စရာ ရှိခဲ့ရင် သိသူများက ထပ်မံ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်စေလိုပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေက ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ နာမည်အောက်က လုပ်ငန်းခွဲတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို အောက်ဖော်ပြပါ Reference Links တွေမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:10 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 7:10 PM No comments:
သြစတြေးလျကမြန်မာကို ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကူမည်၊ စစ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၂၇ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတို့တွင် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် စီစဉ်ချမှတ်ထား
သည့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကူညီမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က တနင်္လာနေ့တွင် ကတိပေး ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် သြစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာ ဂီးလာ့ဒ်တို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံကြစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ : Julia Gillard via Twitter)
မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကင်ဘာရာမြို့
တွင် ဆွေ့ဆုံပြီး ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
တွင် ပြောဆိုသွားကြောင်း သြစတြေးလျ သတင်း
ရေးအတွက် တိုးတက်အောင် လုပ်စရာတွေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးပါ။ ထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မှု ပမာဏကိုလည်း ကျမတို့ ချီးကျူးပါတယ်။...
နောက်ပြီး အနာဂတ် တိုးတက်မှု အတွက်လည်း အကောင်းမြင်ထားပါတယ်” ဟု သြစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် Julia Gillard က ပြောဆိုလိုက်သည်။
သြစတြေးလျ အနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး တဦးကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခန့်ထားရန်ရှိကြောင်း ၎င်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားသည်။
ထို့ပြင် သြစတြေးလျ အနေဖြင့် ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ကန့်သတ်ထားမှု တချို့ကို ရုပ်သိမ်းပေး
တော့မည် ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်သံမှူးတဦး ခန့်အပ်မည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ သို့ရာတွင် လက်နက်ကုန်သွယ်မှု ပိတ်ပင်မိန့် အပါအဝင် အချို့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများကို လောလောဆယ်တွင် ဆက်လက်ထားရှိဦးမည်ဟု ဆိုသည်။
ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုများ ရုတ်သိမ်းမည့်အထဲတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှု အပါအဝင် လူသားချင်း
စာနာမှုနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် အပြန်အလှန် တုန့်လှယ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပါဝင်သည်။ ထိုအထဲတွင် စစ်ရေး ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုများ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ခရီးသွားလာခွင့်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်တာ ပိတ်ပင်ထားမှု
များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက ရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ကြမှုများကို နားလည် အသိအမှတ် ပြု
ကြောင်း သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု ဆိုသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦး၏ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် ပြောဆိုသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 7:01 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကချင်၊ ကရင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ရန်ကုန်မြို့၌ တွေ့ဆုံ၊ ယင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲ ခေတ္တလာရောက်ခဲ့
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲအား ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့၊ ကချင်၊ ကရင် တိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကချင်၊ ကရင် တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ Myanmar Peace Center တွင် တွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲ ခေတ္တလာရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းသို့တွေ့ဆုံမှုမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ကချင်၊ ကရင် တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေ့ဆုံပွဲသို့ လာရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Peace Center မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့က တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံမှုမှာ သုံးကြိမ်ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကချင်တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံမှုမှာမှု ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲနှင့် ပတ်သတ်၍ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်က ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဖြစ်သူက “တိုနီဘလဲက ဘာမှမဆွေးနွေးပါဘူး။ လာမယ်လို့ ကြိုပြောထားတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ခေါ်တာက ဦးအောင်မင်းနဲ့ တွေ့ဖို့ခေါ်တာ။ အဲဒီလို တွေ့နေချိန်မှာ ငါးမိနစ်လောက် စကားလာပြောသွားတာ။ ကျွန်တော်တို့ကို တွေ့ဆုံပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အသွင်နဲ့ လုပ်လိုက်တယ်လို့ ခံယူတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဦးအောင်မင်းနဲ့ ဆွေးနွေးမှု မလုပ်ခင်မှာလည်း အခုလိုတွေ့ဆုံတာ ကချင်လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်လို့ မခံယူစေချင်ဘူးလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
တိုနီဘလဲ ပြောတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာက အတိတ်အဖြစ်အပျက်တွေကို မေ့နိုင်တဲ့သတ္တိစိတ်ဓာတ် ရှိစေချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဆိုတာ စိတ်ရှည်သည်းခံရတယ်။ နောက်ဆုံးပြောတာက ဒီလုပ်ငန်းက မလွယ်ပါဘူး တကယ်လို့များ ကူညီနိုင်တာလေးတွေ ရှိရင်ပြောပါ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ အတူတူပါပဲ ဆိုတာမျိုးပါတယ်” ဟု အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Myanmar Peace Center မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက “ကရင်လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖိတ်ကြားပေးဖို့ KPP ပါတီက ဦးစောထွန်းအောင်မြင့်ကို မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ ကချင်လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖိတ်ကြားဖို့ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းက ဒေါ်ဂျာနန်းကို ကျွန်တော်တို့ MPC က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ကရင်က အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖိတ်ကြားပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တက်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်။ စနေနေ့ကို ပြောင်းပေးပါ ဆိုတဲ့အတွက် စနေနေ့နေ့လည်မှာ လက်ကျန် နိုင်/ကျဉ်း စိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ရှိနေတော့ ညနေသုံးနာရီမှာ ချိန်းပေးတယ်။ အယူအဆ ဆိုတာကတော့ ဘယ်ဘက်က ကြည့်လဲဆိုတာမျိုးတော့ ရှိမှာပါ”ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
“အစည်းအဝေးက ၃ နာရီစတယ်။ ငါးနာရီခွဲမှာ ပြီးမှာဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းနဲ့ အခြားနေရာမှာ တွေ့တဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းက ဒီမှာဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ သူက စိတ်ဝင်စားလို့ သူရောလာကြည့်လို့ မရဘူးလားပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း တိုနီဘလဲက ခဏတွေ့ချင်တယ်ဆိုတာ အားလုံးကို ခွင့်တောင်းပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တိုနီဘလဲကလည်း ဒီလိုမျိုးဟာက အခက်အခဲရှိပါတယ်တဲ့။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ ခက်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်နေတာ ထောက်ခံတယ်။ ဆက်ပြီးကြိုးစားကြပေါ့ဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်” ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ကရင်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင် ၅၀ ဦး ၀န်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကချင်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးဝန်းကျင် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:52 PM No comments:
မြ၀တီမြို့နယ် ထင်းရှူးတောင်ကျေး ရွာ ဘ-ကစာသင်ကျောင်း လာမည့်နှစ်အတွက် ပညာရေးပံ့ပိုးမှု အရေးတကြီးလိုအပ်
Submitted by admin on Friday, 15 March 2013--
မတ်လ ၁၅ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊မြ၀တီမြို့နယ်၊ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်အပိုင် ထင်းရှူးတောင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် တည် ထောင်ထားသော ဘ-က (ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း) မှုလတန်းကျောင်းတွင် လာမည့်ပညာသင်နှစ်အတွက် အကူ အညီများစွာ အရေးတကြီး လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစာသင်ကျောင်းကို ထင်းရှူးတောင်ကျေးရွာ ရန်ကင်းအောင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွင်းရှိ ဓမ္မာရုံတွင် ယာယီ ဖွင့်လှစ် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားဦးရေမှာ ယခင်နှစ်ထက် များပြားလာမှုကြောင့် ကူညီပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကျောင်း အတွက် လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ကိုဖိုးကတုံးက ပြောသည်။
“အရင်နှစ်တွေက ကျောင်းသားဦးရေ ၂၀လောက်ပဲရှိတယ်။ ကျောင်းကတော့ ယာယီအမိုး အကာနဲ့ဘဲ၊ မိုးတွင်းဘက် စာသင်လို့ မရဘူး၊ နောက်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဓမ္မာရုံထဲမှာပဲ ဖြစ်သလို သင်နေရတယ်။ အခုနှစ်က ၃၅ယောက်အထိ တိုးလာတော့ အစစအရာရာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိလာတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
မြ၀တီမြို့နှင့် ၄မိုင်ခန့်အကွာရှိ ၎င်းထင်းရှူးတောင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေရသော ကျောင်းသူကျောင်း သားများ၏ မိဘများမှာ ထင်းခုတ်၊ ၀ါးခုတ်၊ တောင်ယာအလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေရသူများဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်များ အေးဆေးစွာ စာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် စာသင်ဆောင်များ၊ စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ၊ သန့်စင်ခန်းများနှင့် သောက်သုံးရေ စသည့်အကူအညီများ လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ စာသင်နှစ်တွင် ရပ်မိရပ်ဖများ ၊ကျောင်းသားမိဘများမှ တိုင်ပင်ကာ ဘ-ကကျောင်းအတွက် ဘွဲ့ရဆရာတစ်ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ဆရာမတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ထားပြီး ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သူ မနန္ဒာကျော်က မိမိသင်ကြားနေရသည့် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သူမဆန္ဒကို ယခုလို ပြောပြသည်။
ထင်းရှူးတောင်ကျေးရွာမှ အကူအညီလိုအပ်နေသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးများ
“ငွေရေးကြေးရေးအရ မတတ်နိုင်ကြပေမယ့် ကလေးတွေက သင်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း လိုလိုလား လား ပညာသင်ချင်စိတ် ရှိတဲ့အခါကျတော့ ကလေးတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ပညာသင်စေချင်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းကျောင်းသူကျောင်းသားလေးများမှာ မိမိတို့၏ မိသားစု စားဝတ်နေရေး မပြေလည်ခြင်း၊ အနီးအနားတွင် စာသင်ကျောင်း များ မရှိခြင်းနှင့် အခြားစာသင်ကျောင်းသို့ သွားရောက်သင်ကြားရေးတွင် မိုးတွင်းဘက် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းများကြောင့် ယခင်နှစ်များက အတန်းပညာပြီးဆုံးအောင် မသင်ကြားနိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ အခက်အခဲများအတွက် ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဌေးဦးမှ ကမကထပြုပြီး ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး မှုဖြင့် ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းကို ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာသင်နှစ်မှ စတင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:17 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 4:09 PM No comments:
ကိုးရီးယာားနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်လေ့လာရေးအဖွဲ့ MKOသို့လာရောက်လေ့လာ....။
1:27 PM news
MKO တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အမှတ်တရ။
ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ Advocacy Coordinator ဖြစ်သူ Mrs. YeonJoo Lee နှင့်အဖွဲ့တို့ယနေ့ မတ်လ ၁၆ ရက် ၂၀၁၃ တွင် MKO ရုံးသို့ လာရောက်လေ့လာကြသည်။ကိုးရီးယား သို့ ရောက်ရှိနေသော ကရင်လူမျိုးများနှင့်တွေ့ဆုံရာမှတဆင့် ကရင်လူမျိုးများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားသဖြင့်
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေချိန်တွင်လည်းကရင်လူမျိုးဒုက္ခသည်များရှိနေသည်ကိုကြားသိရပြီးလာရောက် လည်ပတ်လေ့လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း Mrs. YeonJoo Lee မှပြောကြားသွားပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 3:52 PM No comments: